Ka dib 18 sano oo uu joogay Google iyo Alphabet, Eric Schmidt ayaa iska casilay jagadiisii ​​| Androidsis
Alphabet waxay si rasmi ah u shaacisay in Eric Schmidt, xubin ka yahay alifbeetka gudiga agaasimayaasha iminkana ah agaasimihii hore ee Google Uma istaagi doono doorashada, marka uu waqtigiisa dhammaado 19-ka Juun. Ka dib markii uu 18-kii sano ee ugu dambeysay noloshiisa ku qaatay dalladda Google, shirkad uu ku biiray 2001.
Bishii Diseembar 2017, Eric wuxuu horey u siiyay tilmaam koowaad oo ah waxa iman doona goorta gudbiyay istiqaaladiisa oo ah madaxa alifbeetada. Wax walba waxay umuuqdaan inay taasi muujinayaan waxaad durba ka fikireysaa howlgabnimadaada. Waxaan rajeyneynaa inuu raaci doono wadadii ay mari lahayeen fuliyaasha kale ee waaweyn sida aasaasaha Microsoft Bill Gates oo uu go'aansado inuu qayb ka mid ah hantidiisa ku bixiyo sadaqada.
Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha, John Hennessy, wuxuu yiri:
Eric wuxuu wax ku darsaday Google iyo Alphabet isagoo ah agaasime guud, madaxweyne iyo xubin ka tirsan guddiga agaasimayaasha. Aad baan ugu mahadnaqaynaa hanuunkaaga iyo hoggaamintaada sannado badan.
Eric Schmidt wuxuu caan ku yahay doorkiisa CEO ee Google 2001 ilaa 2017, wuxuu ahaa agaasimaha guud ee Google sanadihii 2011 ilaa 2015, iyo agaasimaha guud ee alphabet sanadihii 2015 ilaa 2017. Laakiin intaas waxaa sii dheer, wuxuu kaloo ka soo shaqeeyay guddiga maamulka Apple tan iyo 2006 ilaa 2009, laakiin waxaa lagu qasbay inuu ka tago booskiisa markii uu bilaabmay dagaalka u dhexeeya iOS iyo Android.
Ka dib 18 sano oo guddiga mtgs ah, waxaan raacayaa dhaxalka tababaraha Bill Campbell & caawinta jiilka xiga ee kartida si ay ugu adeegaan. Waad ku mahadsan tahay Larry, Sergey & dhammaan asxaabtayda BOD! Aniga ahaan aniga oo ah Lataliyaha Farsamada ee tababara Alphabet iyo meheradaha / farsamada Google, oo lagu daray… ..
Kahor inta uusan ku biirin safka Google, Eric wuxuu ahaa agaasimaha guud ee shirkada Novell sanadihii 1997 ilaa 2001. Markii hore, wuxuu ka shaqeynayay injineer softiweer ah Sun Microsystems. Eric qudhiisa ayaa ku xaqiijiyay bixitaankiisa isagoo adeegsanaya bartiisa Twitterka halka wuxuu qadarinayaa kalsoonida ay Larry Page iyo Sergey Brin isaga siiyeen, badanaa, markay ku kalsoonaayeen inuu fuliyo mashruuca Google.
Markuu ka tago jagadiisa shirkadda, wuxuu noqonayaa la-taliye shirkadda, laakiin isagoo aan lahayn awood go'aan-qaadasho sida uu yeelan doono illaa Juun 19, marka bixitaankiisa shirkaddu uu noqdo mid dhaqan gala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Ka dib 18 sano oo uu ku sugnaa Google iyo Alphabet, Eric Schmidt wuxuu iska casilay booskiisa
Samsung waxay ku shaqaysaa kamaradaha aan la arki karin shaashadda hoosteeda